Toriteny Alahady faha-28 Janoary 2018 – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Nomeny antsika ny teniny dia amin’ny alalan’ny teniny no hahafantarantsika azy, ary izy no nanantona voalohany mba hahafantarantsika azy, dia tamin’ny alalan’ny zava-boahary izany: rivotra, masoandro, hazavana. Tononintsika amin’ny fiekem-pinoana izany. Ato ary dia ambarany mazava fa Andriamanitra no mifidy ny olona mitondra ny teniny, ary lazainy fa izay ambaran’izy ireo dia tenin’Andriamanitra. I Moizy dia nilazan’Andriamanitra hoe: hitako ny fahorian’ny vahoakako any Ejipta ka irahiko ianao hanafaka azy ireo amin’ny fanandevozana. Nantsoina I Moizy fa tsy nanolo-tena. I Ezekiela koa dia nantsoin’Andriamanitra fa nandà mafy nanao hoe tsy vitako izany. Itantsika ny niantsoan’I Jesoa an’ireo Apostôly,olona nanana ny asany sy antom-pivelomany no nantsoiny. Nisy fotoana tsy nihaino an’I Moizy ny vahoaka Israely fa nandeha nanompo sampy, izany dia midika fa manana ny fahalemeny izy ireny. Efa tapaka tamin’ny konsily vatikana faharoa fa azo adika araka ny teny any amin’ny firenena tsirairay ny tenin’Andriamanitra, izany akory tsy midika fa tenin’olona io fa tenin’Andriamanitra. Ary I Jesoa dia niteny mihintsy hoe ny rahalahiko sy anabaviko dia izay mihaino sy manatanteraka ny tenin’Andriamanitra. I Md Paoly dia milaza indrindra ny maha masina sy ny maha tempolin’Andriamanitra ny vatantsika. Tahaka ny sambo tonga eo an-tseranana dia miala amin’izay mamatotra rehetra ka miditra ny seranana dia I Jesoa Kristy izany.
Ny fanontaniana androany dia hoe iza moa I Kristy amintsika? Raha ny evanjely dia milazafa sady mpampianatra izy no mpanala demony, fa isika rehetra koa dia manontany isaky ny alahady hoe iza moa I Jesoa? Dia fanontaniana amintsika mandritra ny herinandro ary hoe tena Tompo tokoa ve I Kristy eo amin’ny fiainantsika.
INONA NO NATAON’I JESOA HAMONJENA ANTSIKA?